Misy olana amin'ny efijery mikasika ny mini iPad? Manome vahaolana anao izahay | Vaovao momba ny gadget
Misy olana amin'ny efijery mikasika ny mini iPad? Manome vahaolana anao izahay
Pablo Ortega | | takela-bato, telephony
Ny fanavaozana ny lozisialy Apple farany dia niteraka olana tamin'ny sasany amin'ireo fitaovan'ny orinasa ary iray amin'ireo lehibe indrindras voakasik'izany dia ny mini iPad (indrindra ny maodely ho an'ny taranaka voalohany). Tsy vitan'ny hoe mahita glitches amin'ny fifandraisana isika amin'ity kinova amin'ny takelaka Apple ity, fa misy ihany koa ny olana goavana amin'ny efijery mikasika ilay fitaovana. Mety hiteraka olana ara-pitaovana izany, saingy misy koa ny hadisoana rindrambaiko mifandraika amin'ny fahatsapana momba ny touchscreen.
Indraindray dia mitranga fa manandrana mivezivezy ny Tsy mandeha tsara ny iPad sy ny écran. Bitsika mora zahana amin'ny FaceTime, ohatra. Mba hanaovana izany dia manomboha antso video vaovao ary zahao raha mifamadika amin'ny fakantsary aoriana ny bokotra na hamaranana ny asa fiantsoana. Raha tsy mamaly ny fikasihan'ny rantsan-tànana izy ireo dia midika izany fa manana olana ny efijery iPad anao. Andramo ireto vahaolana manaraka ireto:
1 1. Manadio ny efijery
2 2. Vaovao farany ny lozisialy
3 3. Force Reset iPad
4 4. Avereno ny toe-javatra
5 Mbola tsy mandeha amin'ny efijery findainao mini iPad?
1. Manadio ny efijery
Mety ho maloto ny efijeryo ary noho izany dia sarotra ho azy ny mamaly ny fihetsikao na tsy fantany mivantana izany. Ity dia olana iray mitovy amin'ilay nangoninay tamin'ny efijery ny Motorola Moto X taranaka voalohany. Ho an'ny efijery iPad madio Manoro hevitra anao izahay mba hampiasa vokatra manokana tsara hanadiovana ny efijery mikasika na hampiasana lamba fotsiny mba hanadiovana solomaso. Raha nametraka takelaka miaro amin'ny efijery ianao dia esory satria mety ho io no antony mahatonga ny olana.
2. Vaovao farany ny lozisialy
Zahao hoe ianao havaozina ny rafitra miasa amin'ny kinova farany navoakan'i Apple. Mandehana any amin'ny Settings- General- Fanavaozana ny lozisialy. Sintomy ny kinova farany. Raha efa nanavao izany amin'ny kinova farany ianao dia manohiza amin'ny dingana manaraka.
3. Force Reset iPad
Raha ny rindrambaiko no olana dia mety ho voavaha amin'ny a noterena indray. Afaka namaha ny olan'ny efijery tamin'ny iPad mini iray voalohany izahay tamin'ity dingana ity. Manoro hevitra anao izahay, voalohany, hikatonanao ireo rindranasa rehetra nosokafanao ary avy eo dia tsindrio ny bokotra off sy ny bokotra ao an-trano mandritra ny folo segondra. Rehefa miseho ny sary famantarana paoma dia azonao atao ny mamoaka ny bokotra. Hamarino raha mandeha tsara izao ny zava-drehetra.
4. Avereno ny toe-javatra
Raha tsy misy amin'ireo dingana ireo no niasa taminao hatreto dia tsara kokoa ny avereno ny fikirana iPad rehetra. Mandehana any amin'ny Settings- General- Reset ary kitiho ny safidy voalohany: «Reset Settings». Ny data sy ny atin'ny iPad-nao dia tsy ho voafafa.
Mbola tsy mandeha amin'ny efijery findainao mini iPad?
Dia azo inoana fa ny olana dia hardware. Ny hany vahaolana sisa dia ny fitondrana azy any amin'ny fivarotana Apple akaiky anao indrindra na ny fifanohanana ara-teknika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » Misy olana amin'ny efijery mikasika ny mini iPad? Manome vahaolana anao izahay
15 hevitra, avelao ny anao
Pablo Rangel dia hoy izy:
tsy mandeha ny mikasika ny Ipad ahy, raha azoko atao ny mampandeha azy fa rehefa misosa aho hisokatra dia tsy avelan'ny fitaovana, efa nataoko daholo ireo dingana naroso fa tsy afaka… Ny ataoko?? arahabaina
Valiny tamin'i Pablo Rangel
Juane9 dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy amiko dia mitranga amiko, afaka miresaka amin'i Siri aho ary mandehandeha mandritra ny resaka, fa rehefa hikorisa mba hamoha ao aho dia mijanona. Ary manana ny Smart Case aho fa rehefa nosokafako izy io dia heverina fa handefa ahy hampiditra mivantana ny pin, fa izao rehefa manokatra aho dia mandefa ahy hikorisa azy. Mino aho fa bug rindrambaiko mifandraika amin'ny efijery fanidiana.
Valio i Juane9
Amin'ny vahaolana 3 dia averina amin'ny laoniny (manomboka amin'ny zero)?
marko dia hoy izy:
Nanova ny écran aho satria, vaky ary tsy mihetsika intsony izy izao fa mandeha fotsiny
Mamaly an'i marko
Daniela dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, nanova azy aho ary tsy mandeha ...
Mamaly an'i daniel
danielihn dia hoy izy:
Salama e..! inona no nataonao tamin'ny fikitika? Novako ihany koa satria ny iray vaky fa ity kosa tsy mandeha.
Mamaly an'i danielihn
Vahaolana telo no namaha ny olan'ny takelaka, tamin'ny efijery adala
Nanoratra irery izy fa lasa adala indray
Edith galvan dia hoy izy:
Rehefa mandrehitra ny iPad aho ary manomboka misy pejy, rehefa afaka 5 min dia manomboka manome tsy tapaka ny efijery, pejy izay tsy anontaniako dia nosokafana, napetraka ao amin'ny Google ny pejy, misokatra ny lalao, ary tsy mamela anao hamerina izany. izany.
Valiny tamin'i Edith Galvan
Carlos dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko ary rehefa avy nanao safidy maro natolony izy ireo dia nitohy toy izao! Mandehana any amin'ny Apple ny vahaolana ary ny fizahana ary amin'ny fomba ahoana no hanovana azy. Tsy rariny ny hoe misy zavatra mandeha ratsy ao anatin'ny fotoana fohy!
Valiny tamin'i Carlos
Rehefa mandrehitra ny iPad aho ary manomboka misy pejy, rehefa afaka 5 min dia manomboka manome tsy tapaka ny efijery, pejy izay tsy anontaniako dia nosokafana, napetraka ao amin'ny Google ny pejy, misokatra ny lalao, ary tsy mamela anao hamerina izany. izany. Ahoana no fomba hamahako an'io ?? Mety nisy tsy nahy namela azy tamin'ny masoandro ve ny antony ??? Misaotra anao
Valiny tamin'i Pablo
OLG GUTIERREZ dia hoy izy:
Mini ny ipad-ko ary lasa adala ny écran fa tsy maintsy ovaiko ny digitizer iray manontolo na ny ambony fotsiny.
Valio amin'i OLG GUTIERREZ
Yenz lopez dia hoy izy:
Miarahaba, fa tsy ny iPad-ko tato ho ato, azonao atao ny mampiasa ny klavier, toa tsy mamaly (ny habaka, ny isa sns) ny tapany farany raha miasa izy dia mila mihodina ianao. Ary mandeha izany nefa vetivety dia miova ihany izy io. Azafady mba omeo hevitra aho mba hamahako azy, misaotra anao mail dopyen@hotmail.com
Valio i Yenz lopez
Ahhh adinoko. Ela ihany koa ny maka vola amin'ny bateria ary miala haingana be, misaotra
FRANCISCO REALDE dia hoy izy:
hace 12 volana
Roa andro lasa izay dia nanavao ny mini ipad aho ary nanomboka omaly dia nanjary tsara izy io ary avy eo nanjombona ny efijery, inona izany ???
Valiny amin'i FRANCISCO RECALDE
Nomacs: Mpijery sary maimaimpoana tsara ho an'ny Windows
Nokia Lumia 830: Famerenana sy famakafakana horonantsary